January kutengesa, tora mukana wavo uchiziva! | Bezzia
Maria vazquez | 09/01/2022 22:00 | Nhau
Chishanu chapfuura zvechinyakare January kutengesa. Kutengesa kunoratidzwa nechero chinhu kuchavandudza kutengesa zvichienzaniswa ne2021 yekutengesa mushandirapamwe uye yatine chokwadi chekuti vazhinji venyu munenge matokundwa, takanganisa here?
Vamwe vasina kuenda kunotengeswa nemazvo unenge wabatsirika zvikuru discounts mumwedzi waDecember naJanuary. Uye ndiko kuti decentralization yekutengesa itsika yakatiperekedza mumakore achangopfuura. Ose ari maviri akanakisa nzira yekuwana izvo zvigadzirwa zvatinoda nemutengo unodhura zvakanyanya, zvisinei, hazvisi zvese zvinoenda!
Zvitoro zvinotanga kutora mukana wekudiwa kwezvipo zveKisimusi vobva vatendeukira kune kutengesa izvo kutanga zviri pamutemo muna Ndira 7, shure kwezuva raMadzimambo. Uye kunyangwe zvitoro zvakawanda zvichitanga kusimudzira zvimwe zvidzikiso svondo risati rasvika, rino richiri zuva ratinogona kutaura zviri pamutemo nezvekutengesa.
1 Makiyi ekutora mukana wekutengesa
1.1 Usashandisa kupfuura zvaungashandisa.
1.2 Tevera mitengo kuchengetedza
1.3 Tarisa mamiriro ekutenga
1.4 Chengetedza tikiti uye kutora
Makiyi ekutora mukana wekutengesa
Uye ndeapi makiyi ekutora mukana wekutengesa? Izvo zvinotengeswa zvinosvika kudarika 50% kuderedzwa mune zvimwe zvitoro, saka ndizvo nyore chaizvo kutenga zvatinoda chaizvo. Nekudaro, zvidzikiso hazvisi chinhu asi zano rekutikurudzira kuti tirambe tichitenga mairi zviri nyore kudonha. Dzivisa uye nyatsotora mukana wekutengesa nemazano anotevera.
Usashandisa kupfuura zvaungashandisa.
Kutengesa inguva yakanaka yekuita tenga usingashandisi zvakawanda. Nekudaro, kana iwe ukatenga zvimwe zvinhu nekuda kwekungoderedzwa, mari yekuchengetera iyo inogona kusanganisira nekutengesa inoenda. Uye sei kuzvidzivirira?
nyora rondedzero pamberi pezvamunoda.
Tichifunga nezverondedzero yapfuura, mutengo waunogona kubhadhara kune zvigadzirwa zvakadaro uye mamiriro ako emari isa bhajeti uye iremekedze.
Isa pakutanga. Kana bhajeti isingakubvumiri kutenga zvese zvaunoda, ipa pamberi kune izvo zvakanyanya kudikanwa.
Tevera mitengo kuchengetedza
Uri kunyatso chengetedza mari nekutenga chimwe chinhu pakutengesa here? Rangarira kuti zvinhu zvakaderedzwa vanofanira kuratidza mutengo wavo wepakutanga pedyo nekuderedzwa, kana kuratidza zvakajeka chikamu chekuderedzwa. Kunyangwe kana uchinyatsoda kutenga chimwe chinhu chinomiririra mari huru kwauri, chakanakira ndechekuti mwedzi usati watevera chinyorwa uye ona kuti mutengo wacho unochinja sei kuti uzive kana uri kunyatsobhadhara zvishoma pachiri.
Tarisa mamiriro ekutenga
Mune dzimwe nzvimbo kutenga mamiriro anogona kusiyana munguva yekutengesa. Vanogona kusagamuchira kubhadharwa kwekadhi rechikwereti, kutanga mamiriro matsva ekuchinja kana kusabvuma kudzoserwa. Vanogona, asi izvo zvinofanirwa kutaurwa zvakajeka. Kana usina chokwadi, zviongorore!
Izvo zvisingafanirwe kuchinja ndeye mushure mekutengesa sevhisi uye garandi application. Izvi, zvisinei nekuti unotenga chigadzirwa panguva yekutengesa kana kunze kweiyo nguva, zvinofanirwa kunge zvakafanana. Usavarega vachikunyengera!
Chengetedza tikiti uye kutora
Chengeta tikiti yekutenga kwese kwaunoita kana uchida kuchinjanisa, kudzoserwa mari kana kuisa chikumbiro. Uye kana iwe uchida kuchinja kana kudzorera chimwe chinhu, chichengete mubhokisi racho. Haasi ese masangano anofanirwa kudzosera mari yako, asi mazhinji anokupa iwe mukana wekuchinjana iyo kana kugamuchira chitoro chemutengo wayo kuti upedze gare gare muchitoro pachayo.
Semutengi panguva yekutengesa iwe uchava nekodzero dzakafanana pane imwe nguva yegore. Kana paine dambudziko uye rikasagadziriswa zvine hushamwari, iwe unogara uine sarudzo kumbira pepa rekukumbira uye fungisisa pachiri chichemo chako kana zvichemo zvako.
Kutenga pa zvivakwa zvakavimbika Uye nekutevera matipi aya iwe uchakwanisa kunakidzwa nekutengesa kwaNdira nenzira ine hutano, kutenga zvine hungwaru uye pasina kuzvidemba mushure mekushandisa zvakawanda.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » January kutengesa, tora mukana wavo uchiziva!